मिरूनाको रूपै मोहनी….
पाेखरा ३१ साउन- नेपालभरिका विभिन्न हलमा ‘साइनो’ फिल्म प्रदर्शन हुँदै ‘साइनो’मा ग्रामीण युवतीको भूमिकामा दर्शकलाई मोहनी लगाउँदैछिन् नायिका मिरूना मगर।
साइनो गाँस्न यही बुधबार आइपुगेकी थिइन् उनी डिल्लीबजारको एक रेस्टुरेन्टमा। आँखाबाट कालो गगल्स हटाउँदै मेचमा बसेकी उनीसँग जिज्ञासा राखियो, ‘यो कुन ब्रान्डको गगल्स हो नि ? ’ उनी हल्का मुस्कुराइन्। र, भनिन्, ‘यसको कुनै ब्रान्ड छैन। म चस्मा, लुगा, जुत्ता चप्पल कुनै ब्रान्डको भनेर तोकेर लाउँदिनँ।’
मिरूनाका अनुसार पहिलो फिल्मको सुटिङमा कामको धपेडीले खानाको ठेगान भएन। बिहानको खाना बेलुकी ३÷४ बजे पनि खाने अवस्था आइपर्‍यो। दुई वर्षअघि ‘लालपुर्जा’ फिल्मबाट डेब्यु गरेकी यी नायिकाले नपत्याउँदो तरिकाले भनिन्, ‘न्युरोड बजार हिँड्दै गर्दा कुनै लुगामा मन बस्यो भने फ्याट्टै किनिहाल्छु।
यी नायिकाले नपत्याउँदो तरिकाले भनिन्, ‘न्युरोड बजार हिँड्दै गर्दा कुनै लुगामा मन बस्यो भने फ्याट्टै किनिहाल्छु। लुगै किन्न मल–सुपरमार्केट धाउँदिनँ।’ कुराकानीकै क्रममा उनले लस्सी मगाइन्। लस्सीको चुस्की लिँदै गर्दा सोधियो, ‘के उनी खानामा ‘कन्सस’ छिन्।’ भनिन्, ‘छैन, छैन। ड्रिंक्स र स्मोक गर्दिनँ। बाँकी पाकेका खानेकुरा जे पनि खाइदिन्छु।’
मिरूनाका अनुसार पहिलो फिल्मको सुटिङमा कामको धपेडीले खानाको ठेगान भएन। बिहानको खाना बेलुकी ३÷४ बजे पनि खाने अवस्था आइपर्‍यो। यसले उनी बिरामी भइन्। भन्छिन्, ‘यस बीचमा पाँच वटा फिल्मको सुटिङ सकाइयो। अब त बेटुंगो खानाको बानी नै परिसक्यो।’
मदिरासँग मन साट्ने उमेरै थिएन। हाइस्कुलदेखि बाँकी कलेजको पढाइ लन्डनमा गर्दा ड्रिंक्स गर्ने साथीहरूको सरसंगत नै भएन।’ बरु उनले खानेकुरामा धरानको ‘बंगुरको सेकुवा’ मिस गर्छिन् रे।
धरानमा हुर्किएकी मिरूना मगरको सपरिवार लन्डन बस्छ। आमा लिम्बू, त्यसैले धरानको घरमै बन्थ्यो छ्याङ। लन्डनमा पनि बियरको कल्चर छ। तर ड्रिंक्सबाट उनी कसरी पो टाढिइन् ? उनले राज खोलिन्, ‘कक्षा ८ सम्म धरानमैं पढेँ। त्यसबेला मदिरासँग मन साट्ने उमेरै थिएन। हाइस्कुलदेखि बाँकी कलेजको पढाइ लन्डनमा गर्दा ड्रिंक्स गर्ने साथीहरूको सरसंगत नै भएन।’ बरु उनले खानेकुरामा धरानको ‘बंगुरको सेकुवा’ मिस गर्छिन् रे।
अहिले उनी सानेपाको एक अपार्टमेन्टमा एक्लै बस्छिन्। फुर्सदको दिन किचेनमा आफैं छिर्छिन्। एकपटक बंगुरको मासु ल्याइछन्। तर आमाले पकाएको जस्तो मीठो नभएपछि बंगुरको परिकार बन्द भयो। अहिले प्राय : चिकेन या सागसब्जी उनको किचेनमा पाक्छ।
सुटिङको बेला त रमाइलै हुन्छ समूहमा खाना खाँदा। तर डेरामा एक्लै खाँदा उनी परिवारका सदस्य ‘मिस’ गर्छिन्। एक छाकको लागि बनाएको खाना उब्रिन्छ। खान फाल्न मन लाग्दैन। माइक्रो ओभनमा तताएर बिहानको खाना बेलुकीको लागि पनि ठिक्क हुन्छ। उनले खानाबारे यसरी बेलिबिस्तार लगाइन्।
धरानमा पढ्दा मेरिना प्राय : क्लास टप हुन्थिन्। नेपालमा ७–८ कक्षामा पढिसकेको विषयवस्तु लन्डनमा ९–१० कक्षामा पढ्दा उनलाई त्यहाँको पढाइ पनि बोझिलो लागेन। त्यसैले त्यहाँका शिक्षकहरूको ‘नोटिसमा’ परेको बताउँछिन्। समाजशास्त्रमा लन्डनबाटै स्नातक सकाएकी उनले पढाइलाई निरन्तरता दिन चाहन्छिन्। तर तगारोको रूपमा आइपुगेको छ सिनेमा। उनका फिल्मले औसत व्यापार गरे पनि उनले भने भटाभट फिल्म पाइरहेकी छिन्।
‘स्नातकोत्तर गर्न आउनुपर्‍यो कि क्या हो ? पढाइबारे कुरा गर्दा उनका परिवारका सदस्य खासगरी आमाले नै सुझाव दिने गरेकी छिन्, ‘सिनेमामा तिम्रो करियर राम्रो भइरहेको छ। बीचैमा किन छाड्छौ। पढाइ त विस्तारै गर्दा पनि हुन्छ।’
धरानको अनाम नाट्य जमातको सदस्य थिइन् मेरिनाको आमा शशि थापा सुब्बा। त्यसैले रंगमञ्चमा छोरीको भविष्य उज्ज्वल देखेकी छिन् उनले। मिरूनालाई पनि लाग्दो रहेछ, फिल्म खेल्ने पनि एउटा उमेर हुन्छ। खासगरी महिला कलाकारको हकमा उमेरले अझ असर पार्छ। त्यसैले उनी केही वर्ष ढुक्कले फिल्ममा जम्न चाहन्छिन्।
के उनलाई ‘होमसिक’ हुँदैन ?
‘होमसिक’ भयो भने त कामै गर्न सकिन्न अन्य अफिसको जस्तो १० बजेदेखि ५ बजेसम्मको जागिर नभएकाले उनलाई रंगमञ्चको जिन्दगी बोर लागेको छैन। बरु एउटा सुटिङ जिन्दगी अर्को साथीभाइहरूसँगको भेटघाट उनलाई दुईटा जिन्दगी बाँचेझैं लाग्छ। अनुप बरालको एक्टर्स स्टुडियो र पछि सुनील पोख्रेलसँग कक्षा लिएकी उनी दुबैलाई ‘गुरु’ दर्जा दिन्छिन्।
फुर्सद हुनासाथ राजधानीको नाटक घरमा नयाँ नाटक हेर्न एक्टर्स स्टुडियोका साथीहरूसँग कुदिहाल्छिन्। अलि बढी फुर्सद भयो भने उपत्यका बाहिर खुला स्थान डाँडाकाँडा घुम्ने रुचि छ उनको। फुर्सदमा मुभी हेर्न, पुस्तक पढ्न पनि रुचाउँछन् उनी। तर फिल्मको कामले उनका फुर्सदका समय कमै हुन्छ अचेल।
बुधबार फिल्म ‘चचहुई’ को डबिङ बीचमै छाडेर कुराकानीको लागि आएकी थिइन् मेरिना। ‘साइनो’ फिल्मको लागि चितवन, पोखरा, काठमाडौंको विभिन्न हलको चक्कर लगाइसकेकी छिन् उनले। चचहुईको काम सकिएपछि उनको योजना छ, धरान गएर बाजे–बोजुहरूलाई भेट्ने। मन मिल्ने एकजना दिदीसँग सिंगापुर घुम्ने। परिवार भेट्न लन्डन जाने। रिफ्रेस भएर आइसकेपछि बल्ल अर्काे फिल्मको सुटिङमा सामेल हुने।
फिल्म ‘शत्रुगते’ मा गीतको एउटा मुखडा छ, रूपै मोहनी। नायिका मिरूना मगरको पनि रूपै मोहनी छ। मुहार टल्काउन गरेको रहस्य लुकाउन चाहँदिनन् उनी। भन्छिन्, ‘कोरियन स्किन केयर प्रयोग गर्छु म।’ हेर्नु छ, समयको दौडमा मेरिनाले नेपाली फिल्म बजारमा कति दर्शकलाई मोहनी लगाउने हुन्। कतिसँग ‘साइनो’ जोड्ने हुन्। स्राेतः अन्नपूर्ण पाेस्ट, लेखकः कृष्णराज सर्वहारी